Xanta Sport-ga ayaa sheegeysa in Messi uu doonayo inuu si dhakhso leh uga tago Barcelona… – Hagaag.com
Xanta Sport-ga ayaa sheegeysa in Messi uu doonayo inuu si dhakhso leh uga tago Barcelona…
Posted on 17 Agoosto 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Lionel Messi ayaa lagu soo waramayaa inuusan qorsheyneynin inuu kusii nagaado Barcelona, ​​halka Neymar laga yaabo inuu soo laabto.
Iyada oo ay jirto jahwareer ka dhex jira kooxda LaLiga, ayaa waxaa jira warar hordhac ah oo ku saabsan mustaqbalka Messi.
Xiddigan ayaa qandaraas kula jira Barca ilaa 2021 – laakiin waxaa laga yaabaa inuu dhaqso uga dhaqaaqo. Messi ayaa doonaya inuu si dhakhso leh uga tago Barcelona, ​​sida laga soo xigtay Esporte Interativo.
Xiddiga lixda jeer ku guuleystay Ballon d’Or ayaa lala xiriirinayaa dhawaanahan kooxda Premier League ka dhisan ee Manchester City iyo kooxda ka ciyaarta horyaalka Serie A ee Inter.
Qandaraaskiisa ayaa socon doona ilaa sanadka soo socda, Messi ayaa la filayay inuu dib ugu saxiixo qandaraas Barcelona, ​​laakiin qaab ciyaareedkooda Champions League ayaa keentay inay kooxdu fowdo gasho.
Marka uu quique Setien ka dhaqaaqo Barcelona, xanta spot-ga ayaa sheegeysa in laga yaabo tababaraha qaranka Holland Ronald Koeman ama tababarihii hore ee kooxda Tottenham Mauricio Pochettino ay yihiin musharixiinta ugu weyn, halka AS ay sheegeyso in tababaraha Netherlands uu yahay kan ugu horeeya.
Dhaqdhaqaaqyo ayaa sidoo kale laga filayaa Camp Nou. Sida laga soo xigtay jariidada Sport, Barcelona ayaa isku diyaarineysa inay heshiis la gaarto xiddiga Paris Saint-Germain Neymar, oo diyaar u ah inay u soo bandhigaan Antoine Griezmann iyo 60 milyan euro oo uu xiddiga reer Brazil dib ugu soo celiso kooxda. Jariidada AS ayaa sheegeysa in Barca ay sidoo kale diyaar u tahay inay iska iibiso Arthur, kaasoo ku biiraya Juventus, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Martin Braithwaite, Junior Firpo, Samuel Umtiti iyo Ousmane Dembele.
Pochettino ayaa lagu soo waramayaa inuu u yahay dooq u furan Barcelona, ​​laakiin tababaraha reer Argentine ayaa laga yaabaa inuu heysto xulasho kale. Jariiradda The Sun ayaa sheegeysa in City ay indhaha ku heyso Pochettino iyadoo shaki uu ku jiro mustaqbalka Pep Guardiola ee tababarenimo.
Waxay u egtahay in Pierre-Emerick Aubameyang uu sii joogayo kooxda Arsenal. Jariirada The Telegraph ayaa warinaysa in kooxda Arsenal ay ogolaatay heshiiska cusub ee xiddigan.
Chelsea waxaa la filayaa inay la soo saxiixato ugu yaraan hal difaac xagaagan. Sida laga soo xigtay The Mirror, waxay isku diyaarinayaan inay la soo wareegaan daafaca City John Stones – xitaa haddii ay soo xerogeliyaan xiddiga Brighton ee Lewis Dunk.
Difaaca kale ee Brighton ayaa sida muuqata la xiiseynayaa. The Sun ayaa sheegeysa in Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham iyo Leicester City ay wada xiiseynayaan Ben White, kaasoo amaah kula jooga xilli ciyaareedkii 2019-20 Leeds United.